I-Rustic Apartment enegadi, ichibi lokuqubha kunye ne-spa eGalapagar
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLinda - BELVILLA
ULinda - BELVILLA unezimvo eziyi-1580 zezinye iindawo.
Thatha ixesha lokuphumla kule ndlu intle yasemaphandleni ineziko, ibekwe kwindawo entle, enenye iflethi.Ifakwe ngokupheleleyo kuzo zonke izinto ezithuthuzelayo, ifumaneka entliziyweni yeentaba zaseMadrid, eGalapagar, ejikelezwe yimithi, indalo kwaye isondele kuzo zonke iinkonzo.
Ngegumbi lokuphumla-ikhitshi, igumbi lokuhlambela elipheleleyo elineshawa, igumbi lokulala eliphindwe kabini, umatshini wokuhlamba kunye nenketho yokomisa (ngesicelo), ukufikelela ngokuthe ngqo kwigadi enkulu kakhulu enamachibi okuqubha a-2 kunye nephuli yangasese, indawo yomlilo kunye ne-BBQ.Ukongezelela, isiphaluka se-Spa (umnini unika, njengesipho esamkelekileyo, iseshoni kwisiphaluka se-spa), khangela iinkcukacha kunye nomnini.
Izilwanyana zasekhaya zivumelekile (iindleko ezongezelelweyo); Nceda kubaluleke kakhulu ukuba undwendwe lugcine ingaphakathi lendlu kunye negadi icocekile ukuba uhlala nesilwanyana sasekhaya.
Ezi zezinye zezibonelelo ezongezelelweyo kunye neenkonzo (nceda uqhagamshelane nomnini, kwindawo):
IMadrid Barajas - uAdolfo Suarez ikumgama oziikhilomitha ezingama-49.3.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Ikhitshi(itoasta, i-cooker(2 izitovu zeringi, igesi), umatshini wekofu(isihluzi), imicrowave, ifriji-isikhenkcezisi), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela(iTV(iscreen esicaba, idijithali), indawo yomlilo, indawo yokuhlala), igumbi lokulala (Ibhedi enye(90 x 190 cm), ibhedi ephindwe kabini(150 x 190 cm)), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese))
i-tumble dryer(ihlawulwe), i-sauna(ihlawulwe), i-jacuzzi(ngaphakathi, ihlawulwe), umatshini wokuhlamba (uhlawulwe), iingcango zegadi, ukufudumeza, igadi, ifenitshala yegadi, i-BBQ(amalahle), indawo yokupaka, ichibi lokuqubha(yabucala, ngaphandle, 5 x I-4 m., ivulwe ukusuka kwi-1/2 Jun upto kwaye ibandakanya i-Aug), idama lokuqubha(ekwabelwana ngalo nezinye iindwendwe, ngaphandle, 14 x 8 m., ivulwe ukusuka kuJul upto kwaye ibandakanya u-Aug), idama lokuqubha(labucala, ngaphandle, 4 x 4 m.)
Umbuki zindwendwe ngu- Linda - BELVILLA
Izimvo eziyi-1 586
Inombolo yomthetho: VT-8510
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Galapagar